«Izao no vokany » -
AccueilTresaka«Izao no vokany »
«Izao no vokany »
10/10/2018 admintriatra Tresaka 0
Tsy sasatra izahay teto amin’ny gazety TRIATRA no nilaza fa tandindomin-doza ny fifidianana. Efa nambara teto hatrany izany, na tain’ny alalan’ny lahatsoratra, na tamin’ny alalan’ny famakafakana toa izao. Ankehitriny, efa miakatra ny hafanan’ny ireo olom-pirenena sasany ao anatin’izao fotoan’ny fampielezan-kevitra izao. Misy amin’ny mpomba ireo kandidà sasany mantsy no efa manomboka mifandramatra sy mifampihantsy eny amin’ny lalana hanaovan’izy ireo izany fampielezan-kevitra izany. Misy amin’ireo kandidà ihany koa no efa miteny sahady fa tsy hanaiky izay voka-pifidianana eo. Izany hoe izay lany aorian’ny fifidianana dia tsy filoham-pirenena amin’izy ireo, vokatry ny tsy fahatomombanan’ny fikarakarana.
Izao toe-javatra izao dia toa manamarina izay efa nolazain’ny ankamaroan’ireo kandidà, fa amboletra no nanaovana izao fifidianana izao, ka tsy maintsy korontana no hiafarany. Maro tamin’izy ireny tokoa mantsy no nilaza fa tokony napetrapetraka tsara aloha ny fanomanana rehetra, nahafahana nanao fifidianana madio, sy mangarahara, ary eken’ny rehetra. Rehefa tsy nisy anefa ny fifampihainoana dia tsy maintsy nandray anjara ihany, ary mbola manao ny fitakiany ny amin’ny tokony hanatsarana hatrany ny fanomanana hatramin’ny androany.
Ny tena loza, misy amin’ireo mpanao politika sasany no mitady ny hevitra rehetra tsy hahatanteraka ny fifidianana amin’ity taona ity. Misy amin’izy ireny araka izany no efa mivorivory any ambadimbadika any, manao ny paikady rehetra amin’ny fanakanana izao fifidianana izao. Raha ny fantatra, dia ho tonga hatrany amin’ny fananganana “fanjakana” vaovao no tanjon’ilay fivoriana, ary misy kandidà miara-miketrika amin’izy ireo amin’izany.
Izay no vokatry ny tsy fifampihainoana eto amin’ny firenena. Samy mandeha amin’izay tiany aleha, ary samy manao izay saim-pantany avokoa mantsy ankehitriny na ny olom-pirenena, na ireo mpanao politika tsy te hiatrika fifidianana, na ireo kandidà efa nanapa-kevitra ny hiroso ihany koa. Tsy ho voaboasana intsony fa efa fantatry ny rehetra ny hiafaran’izao lalana izoran’ny firenena izao. Tokony samy hahatsapa tena araka izany ny rehetra, tsy ahatongavana amin’izany. Efa niaraha-niaina teto mantsy fa tsy nitondra na inona na inona ho an’ny firenena ny vokatry ny korontana. Mbola tsy tara rahateo izao, handaminana izay tsy maty rehetra.
Hopitaly fiterahana Befelatanana : 57 taona aty aoriana vao nisy mpitondra nijery
Miainga amin’ny fametrahana fotodrafitrasa fototra. Io hatrany no ifotoran’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery, entina hampandrosoana ny firenena malagasy. Tafiditra ao anatin’izany indrindra ny fitokanana fotodrafitrasa maro sosona notanterahin’ny Filoham-pirenena mivady, teny amin’ny hopitaly fiterahana Befelatanana sy ...Tohiny